कुखुराको मासु पछिल्लो तीन वर्षयताकै सस्तो, कति छ मूल्य ? हेर्नुस – Rapti Khabar
२५ असोज, काठमाडौं । कुखुराको मासु पछिल्लो तीन वर्ष यताकै सस्तो भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् ।
एक महिनामा तीन पटक मूल्य घट्दा पनि मासु नबिकेपछि प्रतिकिलो तयारी मासुको मूल्य दुई सय रुपैयाँबाट पनि तल झरेको राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी संघले जनाएको छ ।
किन सस्तियो कुखुराको मासु ? हेर्नुस
उत्पादन धेरै र खपत कम हुन थालेपछि कुखुराको मासुको पुनः ओह्रालो लागेको छ। मूल्य प्रतिकेजी ३५ रुपैयाँले घटेको हो।
‘खपत कम हुँदै गएको छ। होटलहरु राम्रोसँग खुल्न नसक्दा मासुको खपत बढ्न सकेको छैन। यस्तै भइरहे भाउ अझै घट्छ,’ अध्यक्ष बीसीले भने।